ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ - ဝီကီပီးဒီးယား
Shan-ni Solidarity Party
၂၀ မေ ၂၀၁၅ (၂၀၁၅-၀၅-၂၀)
အမှတ်(ဓ-၁/၇၀-ခ)၊ ကံကော်လမ်း၊ ၄၀×၄၁နှင့် ၆၇×၆၈လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)ရပ်ကွက်၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ဖိုင်:Shanni Solidarity Party Logo.png
ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (အင်္ဂလိပ်: Shan-ni Solidarity Party; အတိုကောက် SSP) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ နိုင်ငံရေးသဘောတရားမှာ ရှမ်းနီလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖြစ်သည်။ ပါတီမူဝါဒမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွတ်စေရေး တို့ဖြစ်သည်။ ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီသည် ၂၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ ခန္တီးမြို့နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် မိုးညှင်းမြို့နယ်တို့မှ စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်(၁၅)ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ အမည်ဖြင့် ပါတီအသစ်တည်ထောင်ရန် ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလတွင် ပါတီအသစ်မှတ်ပုံတင် ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
↑ "ပါတီမိတ်ဆက် (ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ-S.S.P)" (25 စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀). Voice of Myanmar.
↑ "ရှမ်းနီ (တိုင်လျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီက ၎င်းတို့၏ မူဝါဒ၊ သဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို ဟောပြောတင်ပြ" (7 အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀). Myanmar Digital News. Archived 16 October 2020 at the Wayback Machine.
↑ ၃.၀ ၃.၁ "ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ" (၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၅). ၇ ရက်သတင်းဂျာနယ် (၇၉၈). Retrieved on ၃၀ မတ် ၂၀၁၇. Archived 25 September 2017 at the Wayback Machine.
↑ ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်။ 17 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၃၀ မတ် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (ကျားမင်းပါတီ) ၏ မူဝါဒနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ။ BNI Media Group။ ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရှမ်းနီ(တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်း ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကို ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ [Shan-ni Solidarity Party(SSP) အမည်သို့ ပြောင်းလဲခွင့်ပြုခြင်း]။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (၂၇ မေ ၂၀၁၉)။ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
S.S.P ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ&oldid=691757" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။